Imvelaphi: Omnye othengisa kakhulu kwiDan Brown "Ifomula" | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 26/07/2021 21:34 | into engeyonyani yebuchwepheshe, Ababhali, Inoveli
Imvelaphi (2017) yinoveli yesihlanu yenoveli eneenkwenkwezi uprofesa odumileyo wezakwalizwi u-Robert Langdon. Lo mlinganiswa oyintsomi wenze uDan Brown ongomnye wababhali abathengisa kakhulu ngalo lonke ixesha. Kuphela kwe- Ikhowudi yeDa Vinci (2003) ngaphezulu kwe-80 yezigidi zeekopi sele zithengisiwe ukuza kuthi ga ngoku.
Amanani anjalo avuse umdla wabavelisi abaphambili baseHollywood. Ngapha koko, zontathu ezi ziqhelaniso zefilimu zikhokelwa nguRon Howard obekade edlalwe ngu-Oscar ophumeleleyo: uTom Hanks. Ewe kulungile Imvelaphi Ayisiyo enye yezo bhanyabhanya, ukufota kwayo kunokuba yinto nje yexesha, kuba isihloko Sele iqokelela phantse iikopi ezizigidi ezibini ezithengisiweyo.
1 Uhlalutyo kunye nesishwankathelo soMvelaphi
1.2.1 UThixo, uGaudí kunye nendalo
1.3 Isisombululo esingaqhelekanga
2 Uphengululo nezimvo
3 "Ifomula" uDan Brown
3.1 URobert Langdon, uprofesa waseyunivesithi onomdla
3.2 Amayelenqe, izixeko zembali kunye namaqabane amahle
3.2.1 Izibophelelo zeenkwenkwezi
3.2.2 Ezinye izixeko ezinembali ezichazwe ezincwadini ezazineenkwenkwezi eLangdon
4.1 Ukuqala njengombhali
Uhlalutyo kunye nesishwankathelo se Imvelaphi
En Imvelaphi, UDan Brown uthelekisa imibuzo yesiqhelo yoososayensi abangakholelwayo kubukho bendalo, ukubaluleka kwayo kuncipha imihla ngemihla kwinkulungwane ye-XXI. Ngale nto, umbhali waseMelika usebenzisa umlinganiswa kaEdmond Kirsch, owayesakuba ngumfundi waseLangdon ngokuqaqambileyo. Wakhe ithamsanqa ngenxa yemveliso yakhe yezobuchwephesha kunye nengqikelelo yakhe engqindilili.
Okokugqibela kokufunyanwa I-tycoon encinci ithembisa ukuphendula imibuzo emibini ebikhathaze abantu ukusukela kumaxesha angaphambili: "Sivelaphi? Apho siya khona?". Iimpendulo zingacaciswa kwigala e-Guggenheim Museum e-Bilbao kwaye iimpembelelo zazo zingabaluleka kwezi nkolo zintathu zikhulu emhlabeni, kodwa ...
Imvelaphi (Ingqokelela ...
Ngaphambi kokuba umboniso uqalise, kwavela isiphithiphithi phambi kwesihlwele yeendwendwe kwaye zisasazwa ngqo kwizigidi zababukeli kwihlabathi liphela. Ke isityhilelo esiguqukayo sisengozini yokunyamalala ngonaphakade. Ngenxa yoko, uLangdon kunye noVidal baqala ugqatso olunomdla wokufumana iphasiwedi enika ukufikelela kwi-Kirsch's enigma.
UThixo, uGaudí kunye nendalo
Abalinganiswa abaphambili bafika e-Barcelona, ​​apho uyilo lukaGaudí lunokuba yinto ephambili kwiingcamango zosozigidi osakhasayo malunga nesayensi kunye nendalo. Kuyabonakala ukuba, uThixo kunye nesayensi bahlala phakathi kweentyatyambo, izilwanyana kunye nobunjineli bomoya ezilawula iziseko kunye neekholamu zeCathedral yaseLa Sagrada Familia.
Ezinye iindawo zekomkhulu laseCatalan zichazwe ngokufanelekileyo nguBrown kwi Imvelaphi ziyiGuggenheim kunye neCasa Milà. Nangona kunjalo, Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba iinkcazo zoluntu lwaseSpain kunye noorhulumente zikude lee kunangoku. Umbhali waseMntla Melika ubeka iSpain njengelizwe elinenkolo kakhulu kwaye enzima ngenxa yempembelelo ye-Francoism.
Ubukrelekrele bokufakelwa obenziwe nguKirsch ngokwakhe buvela njengenxalenye enkulu yebali. Ekugqibeleni, ulwazi ngusozigidi oselula lubonakalisiwe kwihlabathi kwaye lukhokelela uLangdon ukuba acinge ngendima yeenkolo namhlanje.. Ukuxelwa kusalatha kwinkolo enye, yenkolo, ngokuhambelana nendalo kunye nokuququzelela unxibelelwano phakathi kwabantu bonke.
Ngaphandle kwamanani ayo omhleli wokuhlela, UBrown utyholwa ngokusebenzisa iipatheni eziphindaphindayo kwiimbali zakhe. Abanye abagxeki bakhalaze ngezityholo zembali zayo ezichanekileyo kunye nokwenziwa kweflethi. Injalo imeko kaJake Kerridge ukusuka Daily Telegraph noMonica Hesse ukusuka IWashington Post, abagxeki abomeleleyo bomsebenzi weNew Hampshire.
Nangona kunjalo, uBrown uhlawula ukuphononongwa okungalunganga, enyanisweni, uhlala ethanda ukuphendula ngokungenangqondo "kubo bonke abagxeki, ndinabafundi abaliwaka abonwabileyo." Ngale ndlela, UJanet Maslin osuka The New York Times (2017) ukumema ukuba ufunde Imvelaphi ngokwembono yoburharha unobuchule. Akumangalisi ukuba intengiso yobhaliso lwesithuthi saseKirsh sikaTesla sifundeka ngolu hlobo: Ijee baya kuwudla ilifa umhlaba ”.
"Ifomula" uDan Brown
URobert Langdon, uprofesa waseyunivesithi onomdla
Lo mlinganiswa wasentsomini yingcali kwezophawu lwezenkolo nakwi iconography evela kwiYunivesithi yaseHarvard. Uyindoda eneminyaka ephakathi-ephakathi ekwimeko entle ngokwasemzimbeni- ngenxa yokuziqhelisela ukuqubha-enelizwi elinomtsalane kakhulu kubafazi. Inememori phantse ye-eidetic, iluncedo kakhulu xa kuthelekiswa iisimboli kunye nokusombulula iimfihlakalo ezinzima.
Amayelenqe, izixeko zembali kunye namaqabane amahle
Umlinganiswa ophambili uhlala ephela etshutshiswa kwaye esongelwa ngokufa ngumntu, ihlelo okanye umbutho ofihlakeleyo onxulumene nemfihlakalo eza kutyhilwa. Ukongeza, kwibali ngalinye kutitshala unenkxaso exabisekileyo yeqabane elikhethekileyo, elinomtsalane nelikrelekrele. Kwi ImvelaphiIndima iyahambelana no-Ambra Vidal, umlawuli we-Guggenheim Museum e-Bilbao.
Kwiinoveli ezibalaseleyo uLangdon, iqabane labasetyhini linolwalamano oluthile nemfihlakalo ephandiweyo okanye inzala yomntu obalulekileyo wembali. Imvelaphi Akunjalo, kuba uVidal ungumlingani weNkosana uJulian (malunga nokuphumelela uyise etroneni). Le yokugqibela igcina iimfihlo ezisondeleyo ezinxulunyaniswe nomfundisi ogama linguValdespino.
Ezinye izixeko ezinembali ezichazwe ezincwadini ezazineenkwenkwezi eLangdon
ERoma kwi Iingelosi kunye needemon
EParis naseLondon kwi Ikhowudi yeDa Vinci
IWashington DC, kwi Uphawu olulahlekileyo
UFlorence, ungene Umlillo omkhulu.
I-Barcelona, ​​kwi Imvelaphi.
UDaniel Gerhard Brown weza kwihlabathi ngoMvulo we-22 kaJuni, 1964 e-Exeter, eNew Hampshire, e-United States. Kulapho wakhulela kwimeko yeenkolelo eziqinileyo zeAnglican phantsi koqeqesho lwabazali bakhe uRichard Brown (utitshala wezibalo) kunye noConstance (umqambi weengoma ezingcwele). Kanjalo Kwidolophu yakhe, umbhali wexesha elizayo wafumana isidanga sakhe kwiPhillips Exeter Academy ngo-1982.
Emva koko uDaniel oselula waqala ukufundela umculo kunye nokwakhiwa kwiKholeji yaseAmherts, lelinye lawona maziko abalulekileyo emhlabeni. Njengenxalenye yokufumana idiploma yakhe, uBrown wachitha ixesha eYurophu (España, ikakhulu). Emva kokuphumelela ngo-1985, wabhala i-albhamu yomculo wabantwana (SynthIzilwanyana) kunye nesiseko seDalliance, inkampani yokurekhoda.
UDan Brown wafudukela eCalifornia ekuqaleni kweminyaka yoo-1990 ngethemba lokuqhubeka nomsebenzi wokuba ngumdlali wepiyano kunye nemvumi. Ngaxeshanye, Ufundise ngesiNgesi nangeSpanish kwisikolo samabanga aphakamileyo iBeverly Hills ukuze azixhase. Kungekudala emva koko, wabhalisa kwi-National Academy of Composers, apho wadibana noBlythe Newlon, owayengumfazi wakhe ukusuka ngo-1997 ukuya ku-2019.
Ukususela ngo-1993, waqala ukubhala ngokuzimisela ngakumbi; isiphumo sayo yayingu Inqaba yedijithali (Inqaba yedijithali) Ngo-1998, inveli yakhe yokuqala. Emva koko bavela Iingelosi kunye needemon (2001) - "ukuqala" kukaLangdon- kunye Iyelenqe (2001), ngaphambi komsebenzi wokumisela uBrown: Ikhowudi yeDa Vinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » into engeyonyani yebuchwepheshe » Imvelaphi
Indlela kaSantiago. Ukukhethwa kweencwadi kunye neenoveli